Sleeve gazety mendrika
Roll hasehonao mamantatra
Naroson'ilay milina fanasan-damba sy ny fivoriana tsary
AUTO nohitsakitsahiko DIE takela
HO AN'NY ALTERNATOR SHELL
HO AN'NY fiara FLANGE
HO AN'NY fiara GAS
HO AN'NY herinaratra Fitaovana
HO AN'NY ELEKITRONIKA
HO AN'NY MEDICAL fitaovana
HO AN'NY REDUCER BOX
PET PREFORM hamolavola takela
Plastic hamolavola BUSHING
PTFE tilting pad naroson'ilay FAMOAZANA
SOLIKA SINTERED BUSHING
SYNCHRONIZER Ring FIVORIAMBE
Fitaovana fampitana PARTS
Zhejiang Feiyu automatique Teknolojia Co., Ltd.was naorina tamin'ny 2004, dia mifototra amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, fanamboarana sy ny fivarotana ny vokatra ara-jaza sliding orinasa. Mihoatra ny 20 efa misy teknolojia R & D manokana, vokatra efa be mpampiasa ao amin'ny fiara orinasa, fanorenana milina, metallurgical orinasa, ny rano conservancy sy hydropower, milina mpanamboatra 30 mahery tsangam-bato orinasa, ao amin'ny an-trano mitondra orinasa nahafinaritra iray nalaza ny ny mpanamboatra.
Zhejiang estar injeniera mekanika Co., LTD. Specializes amin'ny famokarana ny tena lubricating bushing, ho faty, ary ho faty maty nanarato teny namoaka faritra, menaka sintered Bushing, syn peratra, ary PTFE tilting pad Arosoy-jaza izy.
The Company tamim-pahasahiana fanavaozana ny efa misy orinasa bebe kokoa. Miorina amin'ny fanamafisana ny fiofanana tany am-boalohany talenta, ny orinasa be dia be dia mpomba ny ara-tsosialy vato nasondrotry, tanteraka manatanteraka ny maoderina fitantanana rafitra sy ny ranom-barotra paik'ady, ka hanokana ny tenany amin'ny maharitra fampandrosoana ny tena lubricating mitondra orinasa. Ny orinasa miezaka ny fitantanana sy hahatanteraka ny rafitra. Miaraka amin'ny nandroso rafitra fitantanana, ny orinasa dia nanorina tanteraka (ISO9001 ISO / TS16949) kalitao rafitra fitantanana mifototra amin'ny hatsaran'ny politikan'ny "Quality Voalohany, Sary nahazoan Voalohany sy maharitra Fitomboana", sy ny kalitao sy ny fampisehoana efa tonga any ampitan-dranomasina Similar vokatra sady nandroso ambaratonga. Amin'ny maha iray amin'ireo fanta-daza bearings orinasa orinasa ao Jiangsu, Zhejiang, Jiashan Feiyu manana indostria firafitry ny antonony, ary hanatsara hatrany ny fahaiza-manao sy ny orinasa mpamokatra entana anivon'ny orinasa mpamokatra entana. Nanomboka tamin'ny fiorenan'ny orinasa, dia efa nanorina tetikasa tarihin'ny tetikady fampandrosoana ny fanavaozana hatrany vokatra mba hanatsarana ny fifaninanana ny orinasa, ankoatra ny sample famokarana, mitohy ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao.
Mba hijery ny tsena, mifototra amin'ny an'izao tontolo izao ny hihaona foana mpanjifa samihafa kokoa, avo-kalitao ilaina, ary mavitrika hanitatra vahiny tsena iraisam-pirenena sy ny tsena. Products no aondrana any Eoropa Andrefana, Amerika ary Asia Atsimo Atsinanana 20 mahery amin'ny firenena sy ny faritra. Ny orinasa dia hanitatra bebe kokoa ny orinasa marindrano fanekena, mamorona ny toekarena ny sehatra, ny vaovao tsara hanokatra saha, tap vaovao tombony ny orinasa sy hahatsapa ny fampandrosoana ny tanjona stratejika, ary marani-tsaina mamorona hoavy amin'ny namana avy amin'ny lafim-piainana rehetra.
Address: Zhejiang Jiashan Weitang Industrial Park Changsheng Road eo amin'ny faha-9
Sliding bearings-tena matetika lubrica ...
Maimaim-poana mitondra Oil-toetra
Sliding bearings dia tokony hihaino tsara ny ...
Fampirantiana Iraisam-pirenena Ho Construction ...